Kooxda tifaftirka | Qalabka bilaashka ah
Hardware Libre waa mashruuc u heellan faafinta teknolojiyada cusub ee Qalabka Furaha. Kuwo badan oo si fiican loogu yaqaan Arduino, Raspberry laakiin kuwo kale oo aan u badnayn sida FPGAs. Waxaan ka tirsan nahay shabakadda shabakadda Blog kaas oo shaqeynaya ilaa 2006.
Sannadkii 2018-kii waxaan ahayn Wada-hawlgalayaal Freewith mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ee Isbaanishka ee la xiriira dhaqdhaqaaqa Bilaash iyo Furan, labadaba Qalabka iyo Software
Kooxda tifaftirka Hardware Libre waxay ka kooban tahay koox sameeyayaal ah, khabiiro ku takhasusay Qalabka, elektaroniga iyo teknolojiyadda. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda, waad awoodaa noo soo dir foomkan si aad u noqoto tafatire.
Xirfadle IT ah oo aad u xiiseynaya adduunka robotikada iyo qalabka guud ahaan laga soo bilaabo da'da hore, waa wax ii horseeday inaan ka nasto tiknoolajiyadaha ugu dambeeyay ama aan isku dayo dhammaan noocyada looxyada iyo qaababka gacmaheyga ku dhaca.
Anigu waxaan ahay kombiyuutar jecel gaar ahaan Qalabka Bilaashka ah. Midkii ugu dambeeyay ee ku saabsan wax kasta oo ku saabsan adduunkan cajiibka ah, kaas oo aan jeclahay inaan la wadaago wax kasta oo aan ogaanayo iyo baranayo Qalabka bilaashka ah waa adduun xiiso leh, taas shaki iigama jiro.
Tony ee Miraha
Geek la qabatimay tikniyoolajiyadda, wargames iyo dhaqdhaqaaqa sameeyey. Isku soo wada duubida iyo kala daadinta dhamaan noocyada qalabka waa hamidayda, waxa aan waqtiga ugu badan ku qaato noloshayda maalinlaha ah, iyo waxa aan inta badan ka barto.
Jecel ficil nooc kasta oo tiknoolajiyad ah oo adeegsada dhammaan noocyada nidaamyada hawlgalka, iyo sidoo kale qof jecel inuu laashado nooc kasta oo qalab elektaroonik ah oo ku dhaca gacmahayga.